CIA-da Mareykanka Oo Digniin Dhanka Amniga Ah U Dirtay Shaqsiyaad Saaxiibo La Ahaa Jamal Khashoggi – somalilandtoday.com
CIA-da Mareykanka Oo Digniin Dhanka Amniga Ah U Dirtay Shaqsiyaad Saaxiibo La Ahaa Jamal Khashoggi
(SLT-Washington)-Sirdoonka Mareykanka ee CIA-da iyo waaxda amniga dibeda ayaa digniin u jeediyay saaxiibada iyo asxaabta wariyihii geeriyooday ee Jamal Khashoggi.
Digniinta ayaa lagu yiri hadii ay sii wadaan shaqsiyaadkan dhaleeceynta ka dhanka ah boqortooyada ay la kulmi doonaan in la Beegsado.
Qareenka lagu magacaabo Ciyaad Al-Baqdaadi oo ku nool Norway iyo Cumar Cabdi Caziiz oo ah qareen ku sugan magaalada Montreal ee dalka Canada in shaqsi ku nool Mareykanka oo diiday in magaciisa la sheego sababo amni ayaa la shaqeynayay wariye Jamal Khashoggi, sida laga soo xigtay Majalada Time.
Raggaan ayaa si hoose ugala shaqeynayay siyaasad ay halis tahay in la galo iyo mashaariic dhanka xuquuqda aadanaha gaar ahaan dhibaatada ay boqortooyada ku heyso shacabka Sacuudiga.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in sadaxda qareen todobaadyo ka hor loo soo diray digniin dhanka amniga,maadaama ay suura gal tahay dhibaato ay kaga imaan karto Sacuudiga.
Al-Baqdaadi oo ah muwaadin Falastiini ah una ololeeya xuquuqda aadana iyo qoraa qeyb ka ahaa kacdoonadii carabta sanadkii 2011-kii ayaa marar badan dhaleecayay dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.
Ciidanka booliska Norway ayaa 25-tii bishii April waxay ku booriyeen in uu qaato ciidan suga amnigiisa,si looga hortago in la Beegsado.